Logo Redesigns 5 izay namery ny marika | Famoronana an-tserasera
Jesus Arjona Montalvo | | General, Logos
Ny fototry ny marika rehetra dia azy Logo. Toy izany isaky ny famolavolana logo vaovao mety afangaro ny mpanjifanaoary. Ny ankamaroan'ny fotoana izay nanovana ny sary famantarana matetika no tsy ekena amin'ny media sosialy.
Fa maninona no manahirana anay be loatra ny famolavolana sary famantarana?. Tonga amin'ny maha-izy azy avokoa izany rehetra izany. Ireo olona manana fifandraisana matanjaka amin'ny marika dia mazàna mihetsika ratsy amin'ny famolavolana endrika indray, misy fiatraikany amin'ny farany ny fihetsik'izy ireo manoloana ny marika iray manontolo.
Ny tena mampandeha ny sary dia ny mamantatra, ary maneho ny fahatsorana dia ny antonony ... Ny fahombiazany dia miankina amin'ny toetra miavaka, fahitana, fahaiza-miaina, fahatsiarovan-tena, izao rehetra izao ary ny fotoana tsy voafetra. Paul Rand.
Azontsika atao ny manome ohatra ny fanovana farany an'ny logo Google napetrakay amin'ny sary etsy ambony. Mifanaraka amin'ny filozofian'i Google ny sary famantarana vaovao. Saingy ity logo ity dia namoy ny typeface nampahatsiahy ny gazety sy ny milina fanoratana fa tsy izany toa sary famantarana ho an'ny ankizy.
Tsy misy isalasalana fa marika mila mamerina mamorona ny tenany izy ireo ny tenan'izy ireo miaraka amin'ny fanovana ny safidin'ny mpanjifa, ary indrisy, tsy misy fomba ahafahana maminavina ny fihetsiky ny mpampiasa manoloana ity fanovana ity. Nampiasa tetika fifandraisam-bahoaka ny orinasa, saingy toa tsy mety mihitsy izany, toy ny nitranga tamin'ny sary famantarana Spotify miloko maitso, na toy ny Yahoo! napetrakay tamin'ny sary voalohany amin'ity lahatsoratra ity ianao. Saingy tsy ho voakasik'izany ireo orinasa ireo, satria mampiasa Google, Spotify na Yahoo!
Mifanohitra amin'izany, ny orinasa hafa dia tsy dia tsara vintana. Avy eo dia hametraka anao izahay Orinasa 5 izay nanova ny sary famantarana azy ireo ary nahazo hevitra tsara.
1 Azonao atao ny manova tanteraka ny sary famantarana anao, fa tsy azonao atao ny mampiasa azy io.
2 Raha tsy vaky izy dia aza amboarina.
3 Hadisoana marobe.
4 Rehefa nisavoritaka i Foursquare.
5 Raha mitady anao izy ireo, maninona no miafina?
Azonao atao ny manova tanteraka ny sary famantarana anao, fa tsy azonao atao ny mampiasa azy io.
rehefa Microsoft cnanova ny vokany maro indray tamin'ny 2013, niova ny Bing. Navelany ny sary famantarana manga azony, ary fanovana litera manasongadina ny 'b'.
Betsaka no nitaraina fa ilay marika niseho teo alohan'i 'Bing' nitovy be tamin'ny Google Drive izany. Ary na dia manohy manosika mafy an'i Bing ho sehatra aza i Microsoft, amin'ny fanadihadiana tamin'ny 2014 6 isan-jato ihany amin'ireo nohadihadiana dia hevero ny motera fikarohana Bing voalohany.
Raha tsy vaky izy dia aza amboarina.
Taorian'ny nanovana ny sary famantarana tany am-boalohany nampiasain'i Spotify, saika ny zavatra rehetra nataon'izy ireo dia ny nanova ny lokony nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'ny a maitso Mahagaga kokoa (Izaho manokana tsy dia tiako loatra). Raha mbola nahazatra ny aloky an'ity maintso ity ny masontsika dia mitaraina hatrany ny mpampiasa izany ny aloka izay napetrany dia mahatsiravinaindrindra ho an'ny mpamorona sy ny matihanina hafa izay miasa miaraka amin'ny loko.
rehefa Netflix nanavao ny logo azy tamin'ny 2014, dia nesorina ny toetra rehetra izany dia ilay teo aloha. Lasa ilay refy teatra izay navoakany, ary very kely ilay tantara mangatsiaka be ra mandriaka.
Tsy ity no fiasco voalohany natrehin'i Netflix. Tamin'ny 2011 niditra tao amin'ny orinasa DVD tao Qwikster i Netflix. Ho fanampin'ny anarana iray mampieritreritra, izany teny izany miaraka amin'ireo orinasa efa antitra toa an'i Napster sy Friendster dia nomelohina ho an'ilay vokatra. Nampiato ny orinasa ny drafitra 'Qwikster'fa tsy alohan'ny Netflix VERY tsy misy mihoatra ary tsy misy hafa noho ny Mpanjifa 800.000.
Rehefa nisavoritaka i Foursquare.
Rehefa navoaka izy io efa-joro sokera, nanjary iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra izy io, saingy tsy ela dia niova ny raharaha rehefa nilamina ny orinasa. Mba hamerenana ny adin-tsainao, Foursquare dia nanova ny fampiharana sy ny sary famantarana, ampondra nizara roa ny fanompoana nataony, efa-joro sokera y ho be.
Ny fiovana dia nanjary azo antoka fifanjevoana y mahazo aina ho an'ny olona maro izay nampiasa ilay fampiharana. Diso fanantenana ireo mpampiasa fa tsy nanao ny volon-doko mitovy ny orinasa ary nieritreritra fa ny fizarazarana mihitsy tsy ilaina farany nampanantena ny hijanona tsy hampiasa tanteraka ny serivisy.
Raha mitady anao izy ireo, maninona no miafina?
Miaraka amin'ny sary famantarana anao mena tany am-boalohany, ny sary famantarana Radioshack vanim-potoana mora fantatra, efa fantatry ny olona hoe iza no nifaneraserany raha tsy jerena fotsiny. Na izany aza, mba hifaninana amin'ireo magazay toa an'i Apple dia namoaka sary famantarana nofaritan'ny mpanjifa ho toy ny orinasa ilay orinasa "tsy ilaina", miaraka amin'ny loko miloko mahatsiravina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Logos » Famolavolana sary famantarana 5 very ny marika